Ọzọ kristal Factory - China Ndị ọzọ na-emepụta kristal, ndị na-eweta ya
Emeghe YAG kristal
Undoped Yttrium Aluminium Garnet (Y3Al5O12 ma ọ bụ YAG) bụ ihe ọhụrụ mkpụrụ na ngwa anya ihe eji eme ihe maka UV na IR optics. Ọ bara uru karịsịa maka ngwa ọkụ na ume dị elu. Ọnọdụ YAG dị n'ibu na kemịkal dị ka nke Sapphire.
Emeghewo YAP Crystals
YAP nwere nnukwu njupụta, ike dị elu dị elu, kemịkalụ kemịkalụ, anaghị edozi na acid acid, alkali na-eguzogide, ma nwee nrụpụta nrụpụta dị elu na nrụpụta ọkụ. YAP bụ ezigbo kristal mkpụrụ nke kristal.
Emeghee kristal YVO4
Ihe mkpuchi YVO 4 na-enweghị atụ bụ ezigbo ọhụụ mepere emepe nke mepere emepe nke a na-ejikarị n'ọtụtụ ebe na-ewepụ ihe ntanetị_ n'ihi na nnukwu birefringence.
TSAG bụ ihe dị mkpa iji kewapụ ihe maka laser ọzọ maka ọgbọ na - abịa abịa. Dị ka ezigbo kristal magneto-optic dị na mpaghara a na-ahụ anya na infrared ， TSAG nwere uru nke elu Verdet mgbe niile ， magburu onwe ya ihe eji achọ mma na igwe.
Ce: YAG kristal bụ ụdị dị mkpa nke kristal. Tụnyere ndị ọzọ inorganic scintillators, Ce: YAG crystal esetịpụ a elu luminous arụmọrụ na a mbara ìhè usu. Karịsịa, elu nsị ya bụ 550nm, nke jikọtara nke ọma na nghọta na-achọpụta ntụgharị nke nchọpụta photodiode silicon. N'ihi ya, ọ dị nnọọ mma maka ndị na-enyocha ihe ndị na-ewere photodiode dị ka ndị na-achọpụta ihe na ndị na-achọpụta ihe iji chọpụta ihe ọkụ ọkụ. N'oge a, enwere ike ịrụ ọrụ arụmọrụ dị elu. Ọzọkwa, Ce: YAG nwekwara ike iji ya dị ka phosphor na cathode ray tubes na ọcha white-emitting diodes.
TGG bụ kristal magneseto-optical magburu onwe ya ejiri na ngwaọrụ Faraday dị iche iche (Rotator na Isolator) na nso nke 400nm-1100nm, ewepu 475-500nm.